Aluminum mpempe akwụkwọ - China Hongbao aluminum Industry
Hongbao Aluminium aolly conmmon nwere 1000 series, 3000 series, 5000 series, 6000 series, 7000 series, 8000 series.The e ji mara dị ka ndị a:
1000 usoro nnoo ọcha aluminum na a kacha nta 99% aluminum ọdịnaya site na ibu na ike ọrụ obi tara mmiri.
3000 usoro na-alloyed na manganese, na ike ọrụ obi tara mmiri.
5000 usoro na-alloyed na magnesium, na-enye ikenyeneke mbiet corrosion na-eguzogide, na-eme ha kwesịrị ekwesị n'ihi na mmiri ngwa. Ọzọkwa, 5083 alloy nwere kasị elu ike nke bụghị okpomọkụ-emeso alloys. Kasị 5000 usoro alloys gụnyere manganese nakwa.
6000 usoro na-alloyed na magnesium na sịlịkọn. Ha bụ ndị mfe igwe, bụ weldable, na pụrụ ịbụ ọdịda obi tara mmiri, ma ọ bụghị dị elu na-eme na 2000 na 7000 nwere ike iru. 6061 alloy bụ otu n'ime ndị akacha eji general-nzube aluminum alloys.
7000 usoro na-alloyed na zinc, na pụrụ ịbụ ọdịda obi tara mmiri ndị kasị elu-eme nke ọ bụla aluminum alloy (kacha ike ọdụdọ ruo 700 MPa maka 7068 alloy). Kasị 7000 usoro alloys gụnyere magnesium na ọla kọpa dị ka mma.
8000 usoro na-alloyed na ndị ọzọ ọcha nke na-adịghị kpuchie site ọzọ usoro.
aluminum alloy mejupụtara (% )
1050 0,25 0,40 0,05 0,05 0,05 0,05 0.03 99,5 min
1060 0,25 0,35 0,05 0.03 0.03 0.03 0,05 0,05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 99,6 min
1100 0,95 Si + Fe 0.05-0.20 0,05 0,10 0,05 0,15 99,0 min
3003 0,6 0,7 0.05-0.20 1.0-1.5 0,10 0,05 0,15 fọdụrụnụ
3004 0,30 0,7 0,25 1.0-1.5 0.8-1.3 0,25 0,05 0,15 fọdụrụnụ
5005 0.3 0,7 0.2 0.2 0.5-1.1 0.1 0,25 0,05 0,15 fọdụrụnụ
5052 0,25 0,40 0,10 0,10 2.2-2.8 0.15-0.35 0,10 0,05 0,15 fọdụrụnụ
5083 0,40 0,40 0,10 0.40-1.0 4.0-4.9 0.05-0.25 0,25 0,15 0,05 0,15 fọdụrụnụ
5086 0,40 0,50 0,10 0.20-0.7 3.5-4.5 0.05-0.25 0,25 0,15 0,05 0,15 fọdụrụnụ
5154 0,25 0,40 0,10 0,10 3.10-3.90 0.15-0.35 0,20 0,20 0,05 0,15 fọdụrụnụ
5356 0,25 0,40 0,10 0,10 4.50-5.50 0.05-0.20 0,10 0.06-0.20 0,05 0,15 fọdụrụnụ
5454 0,25 0,40 0,10 0.50-1.0 2.4-3.0 0.05-0.20 0,25 0,20 0,05 0,15 fọdụrụnụ
5456 0,25 0,40 0,10 0.50-1.0 4.7-5.5 0.05-0.20 0,25 0,20 0,05 0,15 fọdụrụnụ
5754 0,40 0,40 0,10 0,50 2.6-3.6 0,30 0,20 0,15 0,05 0,15 fọdụrụnụ
6005 0.6-0.9 0,35 0,10 0,10 0.40-0.6 0,10 0,10 0,10 0,05 0,15 fọdụrụnụ
6060 0.30-0.6 0.10-0.30 0,10 0,10 0.35-0.6 0,05 0,15 0,10 0,05 0,15 fọdụrụnụ
6061 0.40-0.8 0,7 0.15-0.40 0,15 0.8-1.2 0.04-0.35 0,25 0,15 0,05 0,15 fọdụrụnụ
6063 0.20-0.6 0,35 0,10 0,10 0.45-0.9 0,10 0,10 0,10 0,05 0,15 fọdụrụnụ
6066 0.9-1.8 0,50 0.7-1.2 0.6-1.1 0.8-1.4 0,40 0,25 0,20 0,05 0,15 fọdụrụnụ
6082 0.7-1.3 0,50 0,10 0.40-1.0 0.60-1.2 0,25 0,20 0,10 0,05 0,15 fọdụrụnụ
7005 0,35 0,40 0,10 0.20-0.70 1.0-1.8 0.06-0.20 4.0-5.0 0.01-0.06 0.08-0.20 0,05 0,15 fọdụrụnụ
7022 0,50 0,50 0.50-1.00 0.10-0.40 2.60-3.70 0.10-0.30 4.30-5.20 0,20 0,05 0,15 fọdụrụnụ
7068 0,12 0,15 1.60-2.40 0,10 2.20-3.00 0,05 7.30-8.30 0.01 0.05-0.15 0,05 0,15 fọdụrụnụ
7075 0,40 0,50 1.2-2.0 0,30 2.1-2.9 0.18-0.28 5.1-6.1 0,20 0,05 0,15 fọdụrụnụ
7079 0.3 0,40 0.40-0.80 0.10-0.30 2.9-3.7 0.10-0.25 3.8-4.8 0,10 0,05 0,15 fọdụrụnụ
8011 0.05-0.9 0.6-1.16 0.1 0.2 0,05 0,05 0,10 0.1 0,08 0,05 0,15 fọdụrụnụ
† Manganese plus chromium ga n'etiti 0.12-0.50%.
†† Nke a ịgba na-emetụta niile ọcha maka nke ọ bụla ọzọ ịgba na-kpọmkwem na a nyere n'usoro, n'ihi na ọ dịghị kọlụm dị ma ọ bụ n'ihi na kọlụm bụ oghere.
Previous: 4 8 aluminum mpempe akwụkwọ
Next: 5154 aluminum alloy waya
5754 H111 Aluminium mpempe akwụkwọ
Alum Ibé akwụkwọ
Gbamgbam mpempe akwụkwọ
Aluminum mpempe akwụkwọ Price
Large Aluminium Ibé akwụkwọ N'ihi Sale
Marine Aluminium mpempe akwụkwọ
Marine mezuwo Aluminium mpempe akwụkwọ
Pure Aluminium mpempe akwụkwọ
na-ekpo ọkụ Rolling aluminum mpempe akwụkwọ